US Virgin Islands dia nandefa hafatra tamin'ny Andro manerantany fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » US Virgin Islands dia nandefa hafatra tamin'ny Andro manerantany fizahan-tany
Septambra 26, 2018
Ny kaomiseran'ny fizahantany ho an'ny nosy virjina amerikana, Beverly Nicholson-Doty, dia nandefa ity hafatra ity tamin'ny Andro manerantany ho an'ny fizahan-tany.
Ny Kaomiseran'ny fizahantany ho an'ny nosy virjina amerikana, Beverly Nicholson-Doty, dia nandefa ity hafatra ity tamin'ny Andro manerantany ho an'ny fizahan-tany:
Rehefa mankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fizahan-tany isika, miaraka amin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO), dia mankalaza izay nataon'ny teknolojia nomerika sy azony atao amin'ny fizahantany.
Mbola vaovao ao an-tsaintsika ny zava-niainantsika tamin'ny taon-dasa raha tsy maintsy namerina nametraka haingana ny paikadim-barotra taorianay ny rivodoza Irma sy Maria.
Ny serasera nentim-paharazana ary koa ny paikady momba ny varotra sy ny varotra dia tsy afaka niatrika ireo fanamby teo noho eo sy ny fiovana haingana teo amin'ny fanarenana. Ity fanelingelenana amin'ny marketing ity araka ny efa fantatray dia nanjary fotoana iray hamoronana traikefa matanjaka amin'ny alàlan'ny fampiasana sehatra nomerika maoderina.
USVIupdate.com dia vavahady fampahafantarana anay taloha, nandritra ary taorian'ireo tafio-drivotra. Izy io dia novaina ankehitriny ary ampiasaina ho tranokala goavambe ho an'ny fivoarana farany eo amin'ny toekarentsika aorian'ny rivodoza. Ny fantsona media sosialy anay dia nanjary foibe hamaly ny fanontaniana, hampiantrano dinidinika ary handefasana vaovao marina sy marina ho an'ny mpanaraka anay. Ireo sehatra ireo dia namela anay hizara ny tantarantsika amin'izao tontolo izao.
Amin'ny maha nosy kely tsy manana tetibola fizahantany voafetra hivarotra ny tanjontsika dia mila manohy manavao sy manararaotra ireo haitao ananantsika isika. Tsy mihatra amin'ny governemanta ihany izany, fa amin'ireo hotely sy orinasa marobe, izay tsy manam-bola amin'ny fampielezana doka lehibe. Na dia tsy maimaim-poana aza ny fanaovana dokambarotra dizitaly, ny fahafaha-manao azy dia mamela ny orinasa kely indrindra hifaninana amin'ny sehatra manerantany.
Ny teknolojia dizitaly dia mamela ireo mpivezivezy tena manandanja eo amin'ny toekarentsika ireo, miaraka amina asa maro miankina amin'izy ireo, mba hampiseho mivantana ny entam-barotra amin'ny mpitsidika mety hamandrika azy ireo amin'ny Internet, ary handamina ny fangatahany sy ny fangatahany. Io dia ahafahan'izy ireo manaraka tsara ny vokatra farany sy ny mombamomba ny tsena - ary, amin'izao vanim-potoana izao, hanarahana ny toetr'andro.
Manantena ny hizara ny valin'ny UNWTO momba ny fandrosoana nomerika ho an'ny indostria amin'ny departemantam-panjakana tsirairay avy izahay, ny sehatra tsy miankina ary ny andrim-pampianarana eo am-panajana ny fahaizanay ary hampitaovana ny tanoranay ho an'ny asa sy asa amin'ity sehatra manandanja ity ho any amin'ny toerana halehantsika ary ny faritra misy anay.
Juneyao Air manonofy nofy ho an'ny fiaramanidina vaovao
Minisitry ny fizahantany any Jamaika hihaona amin'ireo mpandraharaha mpizahatany any Londres